Vaovao - Ho avy ny baiko ferana plastika vaovao!
Ny mpitondra tenin'ny vaomieram-pirenena misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana Meng Wei dia nilaza tamin'ny faha-19 fa amin'ny 2020, ny fireneko no hitarika amin'ny fandrarana sy ny famerana ny famokarana, ny varotra ary ny fampiasana vokatra plastika sasany any amin'ny faritra sy faritra sasany. Nilaza izy fa araka ny "Opinions on Extra Fanamafisana ny fifehezana ny fandotoana plastika" navoaka tamin'io andro io, ny fireneko dia hanamafy ny fifehezana ny fandotoana plastika mifanaraka amin'ny hevitra "mandràra andiany iray, manolo andiany iray amin'ny fanodinana, ary manara-penitra ny andiany iray ”.
Amin'ny faran'ny taona 2020, ny mololo plastika azo ovaina tsy azo ovaina dia ho voarara any amin'ny indostrian'ny mpamatsy sakafo manerana ny firenena; Ny latabatra fanary plastika tsy azo simba dia hararana amin'ny serivisy fanaterana sakafo any amin'ireo faritra miorina sy toerana mahafinaritra any amin'ireo tanàna ambonin'ilay faritra prefektiora. Amin'ny faran'ny taona 2022, ny latabatra vita amin'ny plastika azo simba tsy azo ovaina dia ho voarara amin'ny serivisy fandefasana sakafo any amin'ireo faritra efa miorina sy toerana mahafinaritra. Amin'ny taona 2025, ny habetsaky ny fanjifàna ireo latabatra plastika azo simba tsy misy simba ao amin'ny faritra fanaterana sakafo sy zava-pisotro any an-tanàna mihoatra ny faritry ny prefektiora dia hihena 30%.
Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny fampiasana harona plastika tsy simba amin'ny toeram-pivarotana, fivarotana lehibe, fivarotam-panafody, fivarotam-boky ary toerana hafa any amin'ny faritra naorina an-tanàn-dehibe ao amin'ny tanàna, renivohitra, ary tanàna voatokana samy hafa ao anatin'ny drafitra, ary koa ny sakafo voarara ny serivisy fandraisana zava-pisotro sy hetsika fampirantiana isan-karazany, ary ny tsena ara-drariny no mametra sy mametra ny fampiasana harona plastika tsy simba; amin'ny faran'ny 2022, ny sakany amin'ny fampiharana dia hitarina amin'ny faritra efa nanangana rehetra ao amin'ny tanàna ambonin'ny faritry ny prefektiora sy faritra manorina ao amin'ny faritra amin'ny morontsiraka. Amin'ny faran'ny 2025, ny harona plastika tsy simba dia ho voarara amin'ny bazaar any amin'ireo faritra voalaza etsy ambony.
Amin'ny faran'ny taona 2022, ireo orinasam-paositra any Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong ary ny faritany sy ny tanàna hafa dia mandrara ny fampiasana kitapo fonosana plastika tsy simba, kitapo vita amin'ny plastika azo ampiasaina sns., Hampihenana ny fampiasana kasety plastika tsy simba. Amin'ny faran'ny 2025, ny harona fonosana plastika tsy simba, kasety plastika, kitapo vita amin'ny plastika azo alefa sns ... dia ho voarara amin'ny fivarotana paositra manerana ny firenena.